DHAGAYSO:-Al-Shabaab oo sheegtay sababta ay u weerartay Xarunta Wasaaradda Shaqada | Wardoon
Home Somali News DHAGAYSO:-Al-Shabaab oo sheegtay sababta ay u weerartay Xarunta Wasaaradda Shaqada
DHAGAYSO:-Al-Shabaab oo sheegtay sababta ay u weerartay Xarunta Wasaaradda Shaqada
Barqanimadii shalay ayaa weerar ku bilaawday qaraxyo waxaa lagu qaaday Xarunta Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha ee Xukuumadda Soomaaliya oo ku taalla agagaarka Isgoyska Jubba, waxaana weerarkaas sheegtay Al-Shabaab, iyaga oo shaaciyey sababta ay u weerareen.
Afhayeenka ciidamada Al-Shabaab Cabdi Caziiz Abuu Muscab ayaa ku sheegay sababta ay u weeraeen Xarunta in Wasaaradda ay ku howlaneed qorista Ciidamo la dagaalama Ururka Al-Shabaab.
Warar lagu daabacay Baraha Internet-ka ee taageera Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Wasaaradda ay sidoo kale diyaarineysay ciidamo dharcad ah oo basaasa Culuma’udiinka ku nool Magalada Muqdisho iyo cidkasta oo kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya waa sida ay hadalka u dhigeen.
Sidoo kale waxa uu sheegay Cabdi Caziiz Abuu Muscab in Wasaaradda Shaqada ay sidoo kale qoreysay dhalinyaro ka qeyb qaata dib u dhiska Tiyaatarka Qaranka, iyada oo loo marayo Barnaamijka isxilqaan,taasina uu sheegay inay tahay mid kasoo horjeeda Diinta Islaamka.
Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in weerarkii shalay ay ku dileen 15 oo uu ku jiro Wasiir ku xigeenkii Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaka xukuumadda Soomaaliya , islamarkaana ay ku dhaawaceen 26 kale oo ay saraakiil ku jiraan.
A Somali policeman holds position as al-Shabaab militia storms a government building in Mogadishu, Somalia March 23, 2019. REUTERS/Feisal Omar
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo magacaabay guddiga doorashooyinka
Next articleDHAGAYSO:- Farmaajo iyo Kheyre mukeyf kusii jiri maayaan
DAAWO:-“Waan in la dhisaa Dowlad ku meel gaar ah oo dalka...
DAAWO:-Taliye Saadaq John oo sheegay in Booliska ay hakiyeen kullankii baarlamaanka